क्रानियो-इलेक्ट्रो उत्तेजना (सीईएस) - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
क्रानियो-इलेक्ट्रो स्टिमुलेसन (सीईएस) एक गैर-आक्रमणकारी मस्तिष्क उत्तेजना हो जुन एक व्यक्तिको टाउको भरमा एक सानो स्पन्दित विद्युत प्रवाह लागू गर्दछ। यो सानो इलेक्ट्रिकल उत्तेजना जुन क्रानियम भरमा पछिल्लो रूपमा लागू गरिन्छ यसले एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, र नोरिपाइनफ्रिन न्युरो ट्रान्समिटर उत्पादनलाई उत्तेजित गर्दछ।
यस भिडियोमा, डेव चर्चा गर्दछ क्रानियो-इलेक्ट्रो उत्तेजक उपकरणहरू.
प्रथम शताब्दीअघिसम्म युनानी र रोमीहरूले इलेक्ट्रिक ईलको प्रयोग गर्थे, बिजुलीको उत्तेजनाका लागि “टारपेडो फिश” विभिन्न प्रकारका थिए। १ th औं शताब्दीमा इलेक्ट्रोनिक उत्तेजक उपकरणहरूको आविष्कार भए पनि इलेक्ट्रिक इलको राम्रोसँग प्रयोग भयो। प्रथम शताब्दीका लेखहरूले जीवन्त टारपीडो माछालाई सजिलो बनाउन गाउटबाट पीडित व्यक्तिको खुट्टा मुनि राखेको रेकर्ड गर्दछ दुखाइ। ती माछाहरूलाई टाउको दुखाइको उपचार गर्न व्यक्तिको निधारमा राख्ने रिपोर्टहरू पनि छन्।
क्रानियो-इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन (सीईएस) मा हालको रुचि रोबिनोविच द्वारा आरम्भ गरिएको थियो, जसले १ 1914 १1958 मा अनिद्राको विद्युतीय उपचारको लागि पहिलो दावी गरे। १ XNUMX XNUMX मा, इलेक्ट्रो-स्लीप पुस्तकले सीईएसमा पहिलो गम्भीर काम प्रतिबिम्बित गर्‍यो। यस पुस्तकले युरोप र पूर्वी ब्लाक देशहरू, साथै दक्षिण अमेरिका, एशिया र अन्तमा अमेरिकामा अनुसन्धानलाई प्रेरित गर्‍यो। किनभने प्रयोग गरिएको CES उपकरण भारी, असुविधाजनक र अविश्वसनीय थियो, CES, इलेक्ट्रिक eel जस्तै औषधी उपचारको पक्षमा छोडियो।
१ 1960 s० को दशकमा ट्रान्झिस्टरको आविष्कारको साथ, सानो, कम-शक्ति र भरपर्दो CES उपकरणहरू विकास गरिएको थियो। १ 1975 .XNUMX सम्ममा अमेरिका र युरोपका धेरै कम्पनीहरूले सार्वजनिक प्रयोगको लागि CES उपकरणहरू निर्माण गरिरहेका थिए। यस समयमा, CES मा अनुसन्धान एकदम सक्रिय थियो, र वैज्ञानिक कागजातहरू प्रकाशित भयो।
हालका धेरै अध्ययनहरूले CES लाई चिन्ता कम गर्ने र मदिरा सेवन गर्ने ब्यबहार सुधारको लागि एक विश्वसनीय विधिको रूपमा देखाएका छन्। थप अध्ययनहरूले CES लाई परिस्थितिगत चिन्ता कम गर्न र आईक्यू सुधार्न प्रभावकारी उपकरणको रूपमा देखायो। परिस्थिति चिन्ता दन्त चिकित्सकलाई हेर्नु, परीक्षा लेख्नु, व्यस्त यातायातमा सवारी चलाउनु, कामको तनाव, र यस्तै अन्य चीजहरू समावेश गर्दछ।
मितिमा अनुसन्धान सीईएस विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरूमा प्रयोग गर्ने प्रभावहरूमा अपूर्ण छ, दुबै कम र उच्च फ्रिक्वेन्सीहरू सिकाई सुधार गर्न र चिन्ता र पीडा कम गर्न प्रभावकारी हुन सक्छ। धेरै व्यक्तिहरू सँगसँगै CES प्रयोग गर्थे AVE, रिपोर्ट गरेको छ कि तिनीहरू लामो समयको लागि गहिरो विश्राम अनुभव गरे। प्रवेश बढाउनुका साथै CES ले न्युरोट्रान्समिटर उत्पादन बढाउँदछ। यी न्यूरो ट्रान्समिटरहरू सूचना प्रसंस्करण, मेमोरी, उर्जा स्तर, र शारीरिक कल्याणको लागि आवश्यक छन्।
थप जानकारीको लागि, तपाईं डेभको लेख पढ्न सक्नुहुन्छ CES.
यहाँ अर्को भिडियो छ जहाँ डेभले CES मा व्याख्यान दिँदैछ